Dịka ihe eji ebu eriri na-ebu ebu, a ga-echekwa vulcanizer n'otu ụzọ ahụ dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ n'oge na mgbe ejiri ya ịgbatị ndụ ọrụ ya. Ka ọ dị ugbu a, igwe ọrụ vulcanizing nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara nwere ndụ ọrụ nke ihe karịrị afọ 10 ma ọ bụrụhaala na ejiri ya ma debe ya nke ọma.
Ekwesiri ị issuesa ntị n'okwu ndị a mgbe ị na-akwado vulcanizer:
1. Ebe nchekwa nke vulcanizer kwesịrị ka akọrọ ma kpoo ya nke ọma iji zere sekit eletriki na-ekpo mmiri n'ihi iru mmiri;
2. Ejila vulcanizer n'èzí na mmiri ozuzo iji gbochie mmiri ịbanye na igbe nchịkwa eletrik na efere kpo oku;
3. Ọ bụrụ na ebe ọrụ na-arụ ọrụ bụ iru mmiri na mmiri mmiri, mgbe ị na-ekewasị ma na-ebugharị igwe na-akụzi ihe, jiri ihe ndị dị na ala bulie ya, ekwekwala ka igwe na-akụ mmiri kpọtụrụ mmiri kpọmkwem;
4. Ọ bụrụ na mmiri abanye na efere kpo oku n'ihi arụ ọrụ na-ezighi ezi n'oge eji, biko kpọtụrụ onye na-emepụta ihe maka mmezi mbụ. Ọ bụrụ na nrụzi mberede dị mkpa, ịnwere ike mepee mkpuchi nke efere kpo oku, wụpụ mmiri ahụ na mbụ, wee dezie igbe nchịkwa eletrik ka ọ rụọ ọrụ aka, kpoo ya na 100 ℃, debe ya na okpomọkụ mgbe niile maka ọkara elekere, akọrọ ahịrị, wee Mịnye eriri na steeti akwụkwọ ntuziaka. N'otu oge ahụ, a ga-akpọtụrụ onye na-emepụta ihe n'oge maka ngbanwe zuru ezu nke sekit ahụ.
5.Ọ bụrụ na ekwesighi iji vulcanizer mee ogologo oge, ekwesiri ikpo ọkụ ọkụ kwa ọkara ọnwa ọ bụla (edobere ọnọdụ okpomọkụ na 100 Celsius C), ekwesịrị idobe okpomọkụ ahụ ihe dịka ọkara elekere.